Codsiyada iyo macluumaadka | Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Sawirada iyo fiidiyowyada dhacdooyinka gaarka ah ee iskuulka
Waxaan runtii ku qiimeyneynaa inaad taageereyso oo aad la wadaagto waxqabadyada gaarka ah sida kiniisadaha, bandhigyada iwm. Ilmahaaga, laakiin fadlan weydiiso in aad qaadato sawiro / video ilamahaaga, maadaama qaar ka mid ah aysan haysan ogolaansho ka baxsan isticmaalka dugsiga sawiradooda.
Fadlan sidoo kale feejignaad dheeraad ah markaad geliso sawirro / fiidiyowga warbaahinta bulshada, waxaadna sameyn kartaa oo keliya tan ilmahaaga.
Dharka iyo Iskuduwaha Mutadawacnimada
Fadlan hubso in dhammaan dharka cunuggaaga si cad loogu calaamadeeyo. Waxaan ku dadaalnaa inaanan isku dardarin dharka, laakiin runtii waa mid waxtar leh haddii loo magacaabo. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh haddii aad u soo diri karto labo ka mid ah boimsoles si cunugaagu uu u xirtaan sida kabaha kale ee kabahooda haddii ay dhacdo in ay qoyaan ama dhoobo garoonka dhexdiisa. Waannu ku faraxsannahay wixii deeq ah oo mutadawiciin ah ee loogu talagalay cunto fudud, cunto karis, booqasho waxbarasho iyo wixii la mid ah.
Maadaama aan ka mid nahay barnaamijka 'Mashruuca Miraha iyo Khudaarta ee Dugsiyada, waxaan u soo bandhignaa fursado cunto fudud oo caafimaad leh carruurta. Miro iyo khudaar ayaa loo nadiifin karaa si sahlan / casiir ah loo kariyo, la kariyey ama la cunay. Haddii aad jeclaan lahayd in aan siinno cunto fudud gaar ah ilmahaaga, ama aad jeclaan lahayd inaad wax u soo dirto, fadlan la hadal macalinka fasalka ilmahaaga. Waxaan sidoo kale awoodnaa inaanu bixino caano sida ikhtiyaarka cabitaanka dugsiga.
Fadlan ogsoonow inaanan haysan wax nadiif ah ee dugsiga mid kasta oo ka mid ah carruurta, haddaba fadlan taxadar haddii aad cuntada u soo dirto nuts.
Fasaxyada Dugsiyada Guriga
Fadlan sax sanduuqa ku xiga farriinta si aan u ogaano in la akhriyay.
Macallimiinta soo dira
Inkasta oo aanu aad ugu faraxsan nahay waalidiinta / daryeelayaasha inay la xiriiraan macalimiinta email ahaan, fadlan ogow in badi macallimiintu ay fasal buuxa yihiin, waxayna leeyihiin waqti kooban oo ay ku helaan emailkooda. Haddii aad u baahan tahay inaad si degdeg ah ugala hadasho macallinka ilmahaaga ama haddii ay arintu ku cadaadinayso, fadlan ku qor xusuus qorka guriga / dugsiga ilmahaaga ama farriin taleefan u dir xafiiska xafiiska dugsiga.
Ilmahaagu wuxu haystaa Kaarka Dukumiintiga Hadalka ah. Kuwani waa adiga iyo shaqaalaha fasalka ilmahaaga si aad ugu hadashid oo aad ugu qorto ilbiriqyada 10 si ilmahaagu u wadaagi karo warkooda. Kaararku waxay ku qoran yihiin warqad / sawir-qaadasho (fadlan isticmaal keliya qalinka la siiyay), oo waxaa ku jira jeebka balaastig cad oo aad ku geleyso sawirro gaar ah.
Fadlan u adeegso kuwan inta badan ee aad awoodo, oo xasuuso inaad ku hayso boorsada ilmahaaga sidaa darteed waxaa annaga noo diyaar ah inaan diiwaan galino farriimaha guriga. Tani waxay ku dari kartaa xusuus-qorka guriga / dugsiga ee ilmahaaga.
Waxaan leenahay alaab-qeybiye loogu talagalay carruurta loogu talagalay inay u xirtaan hawa-deynta biyaha quudinta, ama barkadaha dadweynaha markay daba galaan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad dalbato mid loogu talagalay isticmaalka dugsiga ka baxsan, fadlan la soo xiriir Alison Rees dugsiga. Haddii ilmahaagu ubaahan yahay dabo dabaasha, waxaad heli doontaa warqad codsaneysa lacag bixinta.
Halkii cunuggaagu ka maqan yahay hydrotherapy-ga ama dabaasha, haddii aan leenahay il-dheer oo cunug kale uu koray, waxaan u isticmaali doonnaa ilmahaaga. Fadlan na soo wargeli haddii aad naga doorbidayso inaanan sidaas samayn.
Gawaarida ugu horeysa ee baabuurta la dhigo dhamaadka dariiqeena waxaa iska leh Dhaqaatiirta Caafimaadka, goobaha waxaa loogu talagalay shaqaalahooda kaliya. Gaadiidka baabuurta ee baabuurkeenna ayaa sii wadi doona inay xaddidan yihiin. Waxaa jira meelo loogu talogalay waalidiinta / xannaaneeyayaasha inay caruurtooda iska tagaan laakiin aaney joogin muddo dheer kulamada iwm. Waxaan jeclaan lahayn in aan kugu dhiirigelino inaad baabuurkaaga ka dhigto goobta sida ugu dhakhsaha badan.
Booqashada Guriga Hadalka iyo Luuqadda
Takhaatiirtayada hadalka iyo luqadda waxay doonayaan in ay sameeyaan booqashooyinka guriga dhexdiisa inta lagu jiro fasaxyada dugsiga, si ay kuu caawiyaan samaynta barnaamijyada guriga loogu isticmaalo. Haddii aad jeclaan lahayd mid ka mid ah inay kaala soo xiriiraan arrintan, fadlan weydii macalinka fasalka ilmahaaga in uu kuu gudbiyo faahfaahintaada ama u wac 020 8361 1993.